Tarehimarika | January 2022
Ny fampiharana dia tsy afaka nanomboka tsara (0xc000007b) windows 10
Ny fahazoana ny rindranasa dia tsy afaka nanomboka tsara (0xc000007b) 0xc0000005, 0xc0150002, 0xc0000022, 0xc0000018 na 0xc0000142 teo am-panokafana rindranasa na Game amin'ny Windows 10. Ny antony mahazatra indrindra amin'ity olana ity dia ny tsy fitoviana eo amin'ireo rindranasa 32-bit sy ny 64- bit miaraka amin'ny rafitrao. Eto ny fomba fanamboarana
Amboary ny mpamily seho tsy nihetsika intsony ary nahasitrana ny windows 10
Tsy nihetsika intsony ny fahazoana mpamily Display ary efa sitrana izy, mety mihantona vonjimaika ny PC-nao ary lasa tsy mandray andraikitra. Ny olana dia mitranga rehefa ny fizarana Timeout Detection and Recovery (TDR) dia mahatsikaritra fa ny karatra Graphics dia tsy namaly tao anatin'ny fotoana avela, hanamboarana ity fampiakarana ny fizotran'ny TDR amin'ny tonian-dahatsoratra.
Fomba 7 hanamboarana ny efijery mainty Windows 10 miaraka amin'ny cursor aorian'ny fidirana 2021
efijery mainty Windows 10 miaraka amin'ny cursor aorian'ny fidirana na alohan'ny hidirana, Windows 10 Pc niraikitra tamin'ny efijery mainty miaraka amn'ny kintana mipetaka indrindra noho ny olana amin'ny Display Driver ((tsy mifanaraka amin'ny kinovan'ny windows amin'izao fotoana izao, simba, lany andro). Mba hamahana io olana io dia alefa soa aman-tsara. maody ary avereno ny mpamily Display / Graphics
Ny lesoka 0x803F8001 Paint 3D dia tsy misy ao amin'ny Windows 10 amin'izao fotoana izao
raha manandrana manokatra ny Paint 3D dia mandrora lesoka milaza hoe 'Zahao ny kaontinao. Tsy eo amin'ny kaontinao izao ny Paint 3D. ' ary manome kaody hadisoana 0x803F8001.Ny antony lehibe aorian'ity lesoka ity dia ny fampitambarana ny olana eo amin'ny kaonty Microsoft sy ny fitaovanao. ampio fotsiny ny kaontinao ary jereo fa voavaha ny olana
Rafitra sy fahatsiarovana voafehy Fampiasana kapila ambony amin'ny windows 10
Voamarikao ve ny fampiasana disk 100% amin'ny alàlan'ny System sy Memory Memory ary noho io Windows 10 System io dia nanjary tsy nandray andraikitra? To Fix the system and compressed memory high disk use, 100% CPU use Tweak the paging file size for all drive back to automated, Disable System and Compressed Memory from task scheduler
Ny Windows voavaha dia tsy afaka mahita olana momba ny mpamily pirinty mety
Eto izahay dia nitanisa vahaolana roa izay nanampy ny mpampiasa hafa hamaha ny Windows tsy afaka mahita olana mety amin'ny mpamily mpanonta amin'ny Windows 10, 8.1 ary 7.
Windows 10 Jiro alina tsy mandeha aorian'ny fanavaozana? Eto ny fomba fanamboarana azy
tsy afaka mamadika ny endri-javatra Light Night satria efa volondavenona eo amin'ny sehatry ny fampisehoana, Eto ny vahaolana haingana Fix Night Light options dia graded Out amin'ny Windows 10
Vahaolana 3 hanamboarana 'Ny firafitry ny kapila dia simba sy tsy voavaky' ao amin'ny Windows
Tsy misy ny toerana, ny rafitra Disk dia simba ary tsy voavaky, midika hoe simba ny kapila mafy na ny fitaovana USB misy rafitra disk tsy voavaky.
Tsy mandeha ny Internet Windows 10 na mifandray WiFi fa tsy misy fidirana Internet na solosaina finday matetika very fifandraisana internet? Eto ny fomba fanamboarana ny olana
Windows 10 Mihazakazaka miadana? Mitady fanatsarana ny fahombiazan'ny windows 10 hahatonga ny windows 10 hihazakazaka haingana kokoa? Hamarino aloha ny otrik'aretina, ny tsimok'aretina malware, ny famafana ireo rindrambaiko tsy ilaina, ny programa fampandehanana tsy mandeha, ny fampiharana mihazakazaka, ny effets Visual & Animations, ny drafitra angovo avo lenta, manatsara ny fahatsiarovana virtoaly sns
Inona no atao hoe Windows.OLD ary ahoana ny fomba hamafana ny fampirimana ao amin'ny windows 10 1903
Raha faly ianao amin'ny fanavaozana ny fikandrana ankehitriny ny Version 1903, dia afaka mamafa mora foana ny Windows.old Folder amin'ny fampiasana Disk Cleanup Tool mba hanafahana toerana misy kapila
Tsy hitanay ny kaody hadisoan'ny fakantsaranao 0xa00f4244 (0xC00DABE0)
Fahazoana Error tsy hitanay ny kaody fantsom-pahadisoanao 0xa00f4244 (0xC00DABE0) na 0xa00f4244 (0xc00d36d5) ity lesoka ity dia mety lozisialy antivirus manakana ny webcam na fakan-tsary. Na olana amin'ny mpamily webcam izany. Atsaharo ny rindrambaiko Security, alao indray ny mpamily webcam Ataovy azo antoka fa avela hampiasa fakan-tsarin'ny solosaina ny fampiharana
Vahaolana 5 miasa hanamboarana ny lesoka Err_connection_reset amin'ny Chrome
Err_connection_reset dia mitranga matetika rehefa tsy afaka mametraka fifandraisana amin'ny toerana itodiana ilay tranokala tadiavinao. eto ny fomba fanamboarana azy
Problem Ejecting USB Mass Storage Device ampiasain'ny fitaovana ity amin'izao fotoana izao
Fahazoana olana eo amin'ny famoahana fitaovana 'USB Storage Storage Device' Device ampiasain'ny fitaovana io amin'izao fotoana izao 'Raha manandrana manala ny fitaovana USB soa aman-tsara ianao. Ity lesoka ity dia midika fa ny fitaovana USB ezahinao esorina dia ampiasaina ankehitriny. Ary hiarovana ny angon-drakitrao sy ny fitaovanao, ajanon'ny rafitra ny fivoahana. Eto ny fomba fanamboarana an'io
Fahadisoana BSOD tsy azo aleha amin'ny boot eo amin'ny Startup? Noho io hadisoan'ny efijery manga io dia miverimberina matetika ary tsy manomboka ara-dalàna? Amin'ny ankapobeny, ity lesoka ity (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) Bug Check 0x0000007B dia manondro fa ny OS dia tsy nahazo niditra intsony amin'ny angon-drakitra sy ny fizarazaran'ireo rafitra nandritra ny fanombohana.
Fampisehoana vaovao 15 ao amin'ny windows 10 aprily 2018 fanavaozana Version 1803
Windows 10 aprily 2018 fanavaozana v1803 dia vonona hivoatra miaraka amina endri-javatra vaovao maro, toy ny Timeline, Nearby Share, Focus assist, safidy fanarenana tenimiafina ho an'ny kaonty eo an-toerana, ny paingo Bluetooth haingana ary ny fanatsarana bebe kokoa amin'ny Microsoft Edge, ny setting'ny fiainana manokana, ny Cortana Notebook , Fampiharana fikirana ary maro hafa.
raha mahazo lesoka Chrome ianao dia tsy Internet manokana ny fifandraisanao :: err_cert_common_name_ tsy mety Manova daty sy ora ary faritra raha toa ka manampy ianao
[Amboary] Tsy hita ireo fampiharana Taorian'ny fanavaozana ny Windows 10 farany teo
Aorian'ny fametrahana ny fanavaozana ny Windows 10 Fall Creators dia tsy hita avy amin'ny Start Menu amin'ny fitaovana sasany ny apps sasany. Ireo rindranasa tsy hita intsony dia tsy voafintina ao amin'ny Start Menu, na ao amin'ny lisitry ny rindranasa. Ary ny fitadiavana ilay fampiharana tsy hita Cortana dia tsy afaka mahita izany ary manondro ahy ny magazay hametraka azy. Saingy nilaza ny Store fa efa napetraka ny fampiharana.